जनता भन्न थाले–यो लोकतन्त्र हैन ओलीतन्त्र हो – eSajha News
जनता भन्न थाले–यो लोकतन्त्र हैन ओलीतन्त्र हो
प्रकाशित मिति: ५ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०९:३२
माथिका शब्दहरु मैले सडकमा हिड्नेहरुबाट सुनेको हो । यी शब्दहरु मलाई निक्कै अप्रिय पनि लागे, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अरुको लागि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको महसुस हुन नपाउने गरी राजकाज चलाइरहेको अवस्थाले जनमानसमा यस्तो सोचाइ आउनुलाई मैले स्वाभाविक पनि मानेको छु ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यापक भएसँगै सम्पूर्ण देश आतंकित बनेको छ । सरकारले अव छिट्टै कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न २०÷२५ अर्ब रुपैया लगानी भइसक्यो भनेर विवरण सार्वजनिक गर्न मात्र बाँकी छ । कोरोना कहरका तीन महिना नबित्दै दश अर्ब खर्च भइसकेको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेपछि जनमानसमा एक किसिमको आक्रोश पैदा भएको थियो । लकडाउन खुलेपछि सरकारी कार्यालयहरुमा कर दाखिला गर्ने जनताको लामबन्दी नै लाग्यो । सरकारलाई कोरोना रोकथामतर्पm भन्दा सरकारी राजश्व उठाउन आवश्यक थियो । सो लकडाउन समाप्तीपछि पूरा भएको छ । लकडाउनले कोरोना संक्रमण केही शिथिल बनाएको थियो । तर लकडाउन समाप्त भएपछि कोरोनाको संक्रमण पनि सरकारको राजश्व संकलन जस्तै तीब्र गतिमा बढेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नागरिकहरु कोरोना संक्रमणको डरले घरभित्रबाट बाहिर निस्किन नसकेपनि सरकारको कर तिर्न भने जवर्जस्ती जाने गरेका छन् । विश्व कोरोनाका कारणले तहसनहस छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले निर्धारण गरेका मापदण्ड पालना गर्दै धेरै देश कोरोनासँग भिडिरहेका छन् । तर, नेपालमा भने डब्लुएचओका नियम आफूखुसी व्याख्या गर्दै पालना नगरे पनि चलिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने सरकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र उहाँको समूहले नै विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा जारी कोभिड–१९ का सर्वमान्य सिद्धान्तहरू पालना गरिरहेका छैनन् ।
कहिले सचिवालय बैठक भनिरहेका छन् भने कहिले स्थायी कमिटी बैठकका कुरा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पक्षमा नाराबाजी गर्न सडकमा कार्यकर्ताहरुलाई उतार्ने काम गरिरहेका छन् । यी सबै कामहरु देशमा लकडाउन भइरहेका बेला जारी रहे । यही बीच प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसका विरुद्ध बेसार र तातो पानी सेवन गरे हुन्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिले स्वयम प्रधानमन्त्रीको गरिमा माथि आघात पुगेको महसुस गरियो ।
जनताले अपेक्षा गरे अनुसार सुशासन दिन नसकेपनि विश्वलाई आतंकित बनाएको कोरोना भाइरसको विरुद्ध जसरी विश्व जनमत लडिरहेको छ त्यसरी नै नेपाली जनतालाई अभ्यस्त गराउनु पर्ने ठाउँमा संसद बैठक बोलाएर जात्रा देखाउने काम गरियो । सांसदहरुको पीसिआर परिक्षण गराएर सामाजिक दुरी देखाएर संसद बैठक बोलाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । पीसिआर परिक्षणका लागि अनावश्यक लगानी गरिएको मात्र नभइ विना कामको संसद बैठकबाट सांसदहरुको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरियो । सर्वसाधारणलाई भने आफ्नो निजी खर्चमा पीसिआर परिक्षण गर भनेर सरकारी आदेश जारी गरियो । सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।
आम नेपाली जनता धेरै भन्दा धेरै समस्याहरुबाट गुज्रिरहेका बेला सरकारलाई जनताका समस्या सम्बोधन गर्न तर्पm कुनै चासो रहेन । सरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवारीपनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक दललाई चासो भएको पनि पाइएन । नेपाली जनता अभिभावकविहीन अवस्थाबाट पिल्सिनु पर्ने स्थिति देखिन्छ । सत्ता र शक्ति भए राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अरु केही चाहिदैन भने जस्तो गरिरहेको अवस्थाले जनतामा विकल्पको चाहना विकसित गराएको छ । यस्तो अवस्थाले देशमा कुनै पनि खालको उथलपुथल हुन सक्ने खतरा रहन्छ । विश्वको इतिहासलाई नै हेर्ने हो भने जुन देशका जनतामा निराशा र असन्तोष व्याप्त छ त्यस्तो देशमा जनविद्रोह भएको पाइन्छ । जनविद्रोहले देशमा क्रान्तिकारी परिवर्तन पनि ल्याउन सक्दछ भने प्रतिगमनको खतराको पनि त्यतिकै सम्भावना हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मनोविज्ञान सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सोच र चिन्तनले ग्रस्त भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आम जनमानसमा अहिलेको लोकतन्त्र अर्थात गणतन्त्रको अनुभूति हुन सकेको छैन । अझ भन्ने हो भने सत्तासीन दलका नेता र कार्यकताहरुले समेत गणतन्त्र वा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । सरकारको समर्थनमा निस्किएको जुलूसलाई प्रहरीले अवरोध गरेको पाइएन भने सरकारको विरोधमा सडकमा निस्किएका जनतामाथि प्रहरीले निर्ममतापूर्वक शक्ति प्रयोग गरेर दमन गरेको देखियो । यो अवस्थाले जनतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभूति गराउने सवालै रहँदैन । त्यसैले नै जनता भन्न थालेका छन् — यो लोकतन्त्र वा गणतन्त्र होइन, ओलीतन्त्र हो ।
स्वयम् केपी ओलीलाई गणतन्त्रका विरोधी ठान्दछन् मानिसहरु । तर ओली नै गणतान्त्रिक नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुगेको अवस्थाले देशको राजनीतिक शासन व्यवस्था ओलीतन्त्रमा रुपान्तरित भइरहेको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । अहिले तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा अनुकूल हुने हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिनु भन्दा नेपाली जनताका आवश्यकताहरुतर्पm ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । साथै ओलीका विरोधीहरुले पनि र उनकै पार्टी भित्रका नेताहरुले पनि ओलीलाई जनता र देशका निम्ति जिम्मेवार बन्न लगाउनु पर्दछ । पार्टी पद्धतिमा यत्ति पनि गर्न सकिएन भने सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु बेलगाम हुन जाने सम्भावना बलियो रहन्छ । यस्तो अवस्था नै प्रतिगमनका निम्ति सहज मार्ग हुनेछ ।
केपी ओलीले गरेका सबै कामहरु देश र जनताको हितमा छैनन् । केही व्यापारीहरु र स्वयम् ओलीका निकट नातेदारहरु बाहेक अरुका निम्ति लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो भइरहेको छैन । ओलीलाई जे जसो गरे पनि कुर्सीबाट हटाउन सक्ने हैसियत कसैसँग छैन । यस्तो अवस्था यथार्थमा लोकको तन्त्र मान्न सकिदैन । पार्टीको बैठकमा म जान्न भन्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई लज्जाबोध भएन, पार्टीको आदेश पनि म मान्दिन भन्न प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको ह्विपले कुनै काम गरेन । म पार्टीका मिटिङ्गमा बस्दिन भन्दा पनि ओलीलाई कसैले केही लछार्न सकेनन् ! पार्टी पद्धतिमा देखिएको यो भन्दा तानाशाहीपन अरु कस्तो होला ?
केपी ओलीमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी छ, लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव छ र उहाँमा मनोगत भावना छ । त्यसैले पनि देश र जनताप्रति केपी ओली ठट्यौली मात्र बनिरहनु भएको छ । यस्तो अवस्था स्वयम् केपी ओलीको लागि पनि राम्रो होइन् र उहाँ देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नै भएकाले देशको लागि पनि यो अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो । – जनधारणा साप्ताहिकबाट
५ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०९:३२ मा प्रकाशित